China Deep uzo Ball Iburu rụpụta na Factory | Sunshow
Ihe ndị dịnụ: Iburu ígwè / carbon nchara
Brandsdị ndị dịnụ: Jinmi / Harbin
E nwere ụdị dị iche iche dị: ụdị oge niile
Ngwa akporo: Construction ígwè, injinịa ígwè, ala skates, yo yo, wdg
Nwere ike ịnye ọrụ ndị ọzọ: OEM, wdg
Mkpụrụ ụkwụ miri emi bụ ụdị agbacha agba agba.
Ihe mgbọrọgwụ miri emi nke bọọlụ nwere mgbanaka dị n’ime, mgbanaka dị n’ime, bọọlụ nchara na otu ngịga. E nwere ụdị abụọ nke miri emi bọọlụ biarin, otu ahiri na abụọ ahiri. Ejiri ụzọ abụọ miri emi kee ụzọ miri abụọ: mechie ma meghee. Opendị mepere emepe pụtara na iburu enweghị usoro a kara akara. The anọkwasị miri uzo bọl na-ekewa ájá-àmà na mmanụ na-àmà. mechie. A na-eji ihe eji eme ka a na-ekpuchi ihe uzuzu na-eji ihe eji eme ka ájá kpuchie ya, nke na-eje ozi iji gbochie ájá ịbanye n'okporo ụzọ na-agba. Proofdị ihe na-egosi mmanụ bụ akara akara mmanụ kọntaktị, nke nwere ike igbochi griiz na-ebu ihe nke ọma.
Otu ahiri miri uzo bọl agba ụdị koodu bụ 6, na abụọ n'ahịrị miri uzo bọl agba ụdị koodu bụ 4. Ya mfe Ọdịdị na-adaba adaba iji mee ka ọ na-akacha na-emepụta na ọtụtụ-eji ụdị amị.
Deep uzo bọl biarin tumadi agba radial ibu, ma nwekwara ike ibu radial ibu na axial ibu n'otu oge. Mgbe naanị ya na-ebu ibu radial, nkuku kọntaktị ahụ bụ efu. Mgbe ihe omimi miri emi na-agba bọl nwere nnukwu ikpochapụ radial, ọ nwere arụmọrụ nke kọntaktị angular na-ebu ma nwee ike iburu nnukwu axial ibu. Esemokwu ọnụọgụ nke miri bọl bọọlụ dị obere na njedebe ịgba dịkwa elu.
Deep uzo bọl biarin ndị akacha eji Rolling biarin. Ọdịdị ya dị mfe ma dịkwa mfe iji. A na - ejikarị ya ebu ibu radial, mana mgbe ikpochapu radial nke agba a na - abawanye, ọ nwere arụmọrụ ụfọdụ nke kọntaktị kọntaktị angular na - enwe ike iburu njikọ radial na axial. Mgbe ọsọ dị elu ma na-agbanye bọmbụ adịghị adabara, enwere ike iji ya buru ibu ọrụ dị ọcha. Tụnyere ndị ọzọ ụdị biarin na otu nkọwa na akụkụ nke miri uzo bọl biarin, nke a na-amị nwere obere esemokwu ọnụọgụ na a elu ịgba ọsọ. Otú ọ dị, ọ naghị eguzogide mmetụta ma ọ gaghị adabara ibu dị arọ.
Mgbe etinyere agba bọọlụ miri emi dị na aro ahụ, enwere ike igbochi axial nke oghere ma ọ bụ ụlọ ahụ n'ime mkpochapụ axial nke mgbatị ahụ, yabụ enwere ike idozi ya na ọnọdụ abụọ. Tụkwasị na nke a, ụdị agba a nwekwara ụfọdụ ogo itinye aka. Mgbe ọ masịrị 2′-10 ′ n'ihe gbasara oghere ụlọ, ọ ka nwere ike ịrụ ọrụ ọfụma, mana ọ ga-enwe mmetụta ụfọdụ na ndụ nke ịgba.
Enwere ike iji bọọlụ bọọlụ miri emi na gearboxes, akụrụngwa, motọ, ngwa ụlọ, injin na-ebugharị ụlọ, ụgbọ njem, igwe ọrụ ugbo, igwe ihe owuwu, igwe ihe eji arụ ọrụ, igwe na-agba ọsọ, yo-yos, wdg.
Ngwunye uzo miri emi nke uzo 1: pịa ihe kwesịrị ekwesị: mgbanaka dị n'ime nke agba na shaft ahụ jikọtara ya, na mgbanaka mpụga na oghere oche nke na-adabaghị adaba, enwere ike pịa ya , na mgbe ahụ ogwe osisi ahụ na mgbatị Tinye ha n'ime oghere oche na-ebu ọnụ, na mpe mpe akwa aka uwe nke ejiri ihe eji eme ihe (ọla kọpa ma ọ bụ nchara nchara) na ihu ihu nke mgbanaka dị n'ime ya n'oge mgbatị. Mgbaaka dị n'èzí nke mgbatị ahụ jikọtara ya na oghere nke oche na-ebu, na mgbanaka dị n'ime na aro ahụ bụ mgbe ihe ahụ dabara, enwere ike ịpịpụta ihe ahụ n'ime oghere oghere ahụ. N'oge a, oghere dị n'èzí nke aka uwe mgbakọ kwesịrị ịdị ntakịrị karịa dayameta nke oghere oche ahụ. Ọ bụrụ na mgbanaka ahụ na-agba agba ahụ ejiri nke ọma na oghere ya na oghere oche ya, wụnye mgbanaka dị n'ime ya na Mpụga nke dị n'èzí kwesịrị ịpinye ya n'ime oghere ahụ na oghere oche n'otu oge ahụ, na usoro nke nzukọ a ga-enwe ike mpikota onu. ihu ngwụcha nke mgbanaka dị n'ime na mgbanaka mpụga n'otu oge.
Okpu uzo di omimi nke uzo uzo abuo: ihe kwesiri ikpo oku: site na ikpo oku ma obu ibu oche, na-eji mmeba okpomoku gbanwee ihe kwesiri ekwesi n'ime ogha. Ọ bụ usoro a na-ejikarị arụ ọrụ na nchekwa. Usoro a kwesịrị ekwesị maka nnyonye anya buru ibu Iji wụnye eriri ahụ, tinye mgbatị ahụ ma ọ bụ mgbanaka a na-ekewapụ n'ime mmanụ mmanụ ma kpoo ya dum na 80-100 ℃, wee wepụ ya na mmanụ ahụ ma wụnye ya na osisi ahụ ozugbo enwere ike , iji gbochie ihu mgbanaka dị n'ime ya na ubu ubu jụrụ ma ọ bụrụ na adabaghị adaba, enwere ike ime ka amamịghe ahụ sie ike mgbe ọ jụrụ. Mgbe mgbanaka dị n'èzí nke eriri ahụ na-ejikọsi ya ike na oche oche nke nwere ọkụ, a ga-eji usoro ọkụ ọkụ nke kpo oku na-ekpo ọkụ iji zere ọkọ na elu. Mgbe ị na-ekpo ọkụ na-eburu ya na tank mmanụ, e kwesịrị inwe ihe jikọrọ ya na ebe dị anya site na ala nke igbe ahụ, ma ọ bụ kpọgidere ya na nko. Enweghi ike itinye akwa ahụ na ala nke igbe ahụ iji gbochie adịghị ọcha na-abata na mbata ma ọ bụ kpo oku na-enweghị atụ. A ga-enwerịrị temometa n'ime tank mmanụ. Kpachara anya na-achịkwa mmanụ mmanụ ka ọ ghara ịfe 100 Celsius C iji gbochie omume nke iwe iwe ma belata ike nke ferrule ahụ.
Nke gara aga: Angular kọntaktị bọọlụ biarin
Osote: * Tụkwasị na ala agba
Bearinggba bọọlụ onwe gị
Inye bọl agba
* Tụkwasị na-agba
Thin-Walled bọl agba